Ndriandahy Mahamoudou : “Mba tsy ho kiantranoantrano ny fifantenana mpikamban’ny FFM” | NewsMada
Ndriandahy Mahamoudou : “Mba tsy ho kiantranoantrano ny fifantenana mpikamban’ny FFM”
Hanao ahoana ihany ny fampihavanam-pirenena? Hiroso amin’ny fanaovana sivana izay ho mpikamban’ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy (FFM) vaovao ny komity mpifantina ato ho ato. Maneho ny fijeriny ny filoha nasionalin’ny firaisamonina sivily Voifiraisana/PFNOSCM, Ndriandahy Mahamoudou: “Mampanahy sao mbola hisy kiantranoantrano toy ny tamin’ireo andiany roa teo aloha indray ny fifantenana izay ho mpikamban’ny FFM.” Dinidinika…
Gazety Taratra (*): Ahoana ny fijerinao ny fomba hifantenana ny firotsahana ho mpikambana ao amin’ny FFM vaovao, hifarana ny 21 jolay?
Ndriandahy Mahamoudou (-): Tena zava-dehibe tokoa ny hijoroan’ny sampandraharaha misahana manokana ny fampihavanam-pirenena. Iaraha-mahalala fa maro ireo disadisa eo anivon’ny fiarahamonina, tsy mbola nahitana vahaolana hatramin’izao. Anisan’izany, ohatra, ny fivangongoan’ny enti-manana eto an-dRenivohitra amin’izay ilaina amin’ny fampandrosoana.
Eo koa ny lonilony tsy mbola mivaha naterak’ireny krizy politika nifanesy ireny, indrindra fa ny farany teo. Misy ny elanelana be loatra eo amin’ny manana sy ny mahantra. Diso tafahoatra ny kolikoly, mahatonga ny fanjakan’ny tsy rariny eo anivon’ny fiarahamonina. Mbola eo ny fandisoana ny tantaram-pirenena, ka mora ampiasaina ho fitaovana fandranitana adim-poko… Ilaina vahana ireny disadisa ireny, satria miteraka sakana ho an’ny fampandrosoana maharitra.
* Tsy efa nisy ve ny asa nataon’ny FFM teo aloha?
– Nisy ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy (FFM) teo aloha, izay tsapan’ny maro fa tsy nahatontosa mihitsy ny andraikitra fototra nametrahan’ny firenena azy ireo taorian’ireny krizy namaivay nandalovan’ny firenena ireny. Tsy nanana ny famendrehana nifanaraka tamin’izany andraikitra goavana izany ny mpikambana maro tao aminy, koa rariny loatra raha soloina.
Efa mpikambana fanindroany no nandrafitra ny FFM farany teo. Satria voatery noravana ireo mpikambana voalohany, raha vao tafatsangana noho ny fahitan’ny maro fa tsy nahomby. Izao FFM hatsangana izao, mpikambana fahatelo.
* Azo antoka amin’izay ve fa hitondra fanovana eo amin’ny fomba fiasa sy vokatra andrasana aminy ?
– Sarotra hatreto no hino hoe azo antoka fa hitondrana fanovana, na eo amin’ny fomba fiasa na ny vokatra amin’izay izy ireo eo amin’ny fanatsarana ny tontolo politika sy fiarahamonina eto amintsika… Maro no mety ho antony. Voalohany, maro loatra ireo mpikambana tendren’ny filoham-pirenena, ka hiteraka tsy fahatokisana feno io rafitra io avy amin’ny ankolafy hafa.
Manaraka izany, tsy nisy fangaraharana ny fanendrena ireo mpikambana ho mpifantina. Ny fitondrana ankehitriny no nanendry azy ireo tamin’ny fomba ofisialy. Ny fanontaniana dia hoe: ho azon’ny ankolafin-kery rehetra antoka ve fa safidy madio, tsy misy kiantranoantrano ny fomba fiasan’ireo mpikambana ao amin’ny komity mpifantina ireo?
Farany, hatreto, noho ny tsy fisian’ny fangaraharana: tsy misy mahalala ny fomba hisafidianan’ny komity mpifantina ireo kandidà, ka mampanahy sao mbola kiantranoantrano toy ny tamin’ireo andiany roa teo aloha indray no hisy.
* Ahoana ny fiheveranao fa tokony hanaovana ny fifantenana mba ho tena mangarahara?
– Voalohany aloha, tokony hanaja tanteraka ny voalazan’ny lalàna lah. 2016-037 momba ny fampihavanam-pirenena izy ireo, indrindra fa momba ny And. 12, 13, 14, 16, 17. Izany hoe, amin’ny ankapobeny: olona manana fahalalana ampy amin’ny andraikitra goavana andrasana aminy, tsara fitondran-tena, tsy mpanao kolikoly, saro-piaro amin’ny fahamarinana sy ny tombotsoa ambonin’ny firenena…
Manaraka izany, mila fangaraharana tanteraka ny fifantenana. Tokony hisy tatitra amin’ny antsipiriany matetika azon’ireo kandidà rehetra sy ny vahoaka malagasy momba ny fizotran’ny fifantenana. Tokony hatao eo ambany fanaraha-mason’ny Birao mahaleo tena iadiana amin’ny kolikoly (Bianco) sy ny Komity ho amin’ny fiarovana ny fahitsiana (CSI) ny fifantenana. Mba hahafahana mahazo antoka fa tena mizotra amin’ny fomba madio izany, tsy ananana ahiahy.
Farany, tsy tokony hanana kandidà harovany ny mpifantina. Ny mpifantina tsirairay, rehefa handinika antontan-taratasina kandidà ananany rohim-pihavanana na koa iray fikambanana aminy, ohatra: tokony hivoaka tsy mandray anjara amin’ny fifantenana. Mba hampitovy lenta tanteraka ny kandidà rehetra izany. Raha ireo fepetra telo ireo fotsiny no voahaja tanteraka, azo antoka fa hadio ny sivana, ary mety ho olona mendrika tokoa no handrafitra io FFM vaovao io.